Home Wararka Safiirka Mareykanka oo warqadaha looga guddoomay Xalane
Wasiirka Arrimaha Dibadda Xukuumadda xilgaarsiinta Cabdisaciid Muuse Cali, ayaa maanta nuqul ka mid ah warqadaha aqoonsiga danjirenimo ka guddoomay Safiirka Cusub ee dowladda Maraykanku u soo magacowday Soomaaliya Mudane Larry André.
Wasiirka ayaa tegay Garoonka Diyaaradaha Aaden cadde ee magaalada Muqdisho, halkaas oo uu ku qaabilay safiirka Mareykanka, ugana guddoomay Aqoonsiga Danjirenimo. Diblomasiyiinta Mareykanka ayaa amni ahaan ku eg xeyndaabka Garoonka, iyadoo madaxweyne Farmaajo intii uu xilka hayey Garoonka u tegay inuu waraaqaha ka guddoomo danjireyaashii Mareykanka.
Safiirka iyo Danjiraha ayaa ka wada hadlay xoojinta xiriirka labo geesoodka ah iyo iskaashiga Labada Dowladood ee dhinacyada amniga, dhaqaalaha, horumarinta, iyo diblomaasiyadda, isaga oo Danjire André soo bandhigay dadaalka uu ku bixin doono adkaynta xiriirka diblomaasiyadeed iyo wax-wada-qabsiga ka dhexeeya Labada Dowladood.
Previous articleMuuse Biixi oo Magacaabay Guddiga diwaangalinta ururada Siyaasadda
Next articleCali M. Geedi oo dalaalay iibinta Korneel Xuud iyo dalacsiin lacag lagu kabay